ပြီးကျောက်ကျောစားတယ် ပြီးတော့ နို့စတော်ဘယ်ရီကျောက်ကျောသောက်သွားတယ် ဟိဟိ အကုန်ယူသွားပြီနော်
အယ် အိမ်ရှင်မစစ်စစ်ကြီး လုပ်နေတယ်ပေါ့လေ။ စားစရာများကို စားချင်သွားကြောင်းပါ။
ညီမလေးရေ.. တုံယမ်ဆန်ပြားဟင်းစားပြီး စပ်လို့ ကျောက်ကျောပါစားသွားတယ်.. အများကြီး ချက်စားဖြစ်တာပဲ.. ဒါဆို တိုကျိုလာလည်ဖြစ်ရင် ညီမလေး လက်ရာစားရမယ်.. ယောင်းမကတောင် ချီးကျူးတယ်ဆိုတော့ ဒါ တကယ်ကောင်းလို့နေမှာ... :D ညီမရေ.. အဲဒီ ယိုးဒယားဆိုင်က ဆန်ပြားကို အမတော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လုပ်ရင် သုံးတယ်.. အမသုံးတဲ့ ဆန်ပြား နဲ့ တူလားတော့ မသိဘူး... ညီမလေးဆီ ဓာတ်ပုံပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး အခုထိ မပို့ဖြစ်သေးဘူး.. ဆောတီး.. :D
မမ ကျောက်ကျောလေးလှတယ်နော်... ထိုးတတ်ဖူးး(
မလုလု---> စားပါအမရေ အဝသာ စားသွား။ :D
မမနိ---> အဟိ :P
မမွန်---> "ဝေ့"တဲ့ ကရင်ကလားဝေ့!?
ညီမရွှန်းမီ---> ကွန်ပျူတာမှာ သွားရည်တွေ စင်သွားပြီလား။ :D
စုဗူးအိမ်---> တို့လည်း ကြိုက်ကြိုက်။ :P
မမိုးကောင်းသူ---> ကြိုက်ရင် အဝသုံးဆောင်ပါရှင်။ :)
မနု-စံ---> ရှမ်းခေါက်ဆွဲမှာ သုံးတာက ပိုမျှင်တာများလားမသိဘူး။ ညီမဝယ်တာ 3mm size ပါ။ 1mm size လည်းရှိတယ်။
ညီမစိမ်းစိမ်း---> အမတို့လည်း ရမ်းသမ်းထိုးထားတာပါ။ :)
ကျောက်ကျောထဲက အုံးသီးနဲ့သာဂူစေ့လားဟင်? သာဂူစေ့ပါတာတော့ စားဖူးဘူး။ တော်တော်ကောင်းမှာနော်။ အဟီး ရှလွတ် :P
ညီမလေးကျောက်ကျောက ပိုမိုက်တယ်....း)
၂၆ ရက်နေ့ အစ်မနဲ့ သမီးလေး ခီတစန်းဂျူးကိုလာရ
yar---> သာကူစေ့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပင်ပွါးစေ့ပါ။
မဝါ---> အမလုပ်တဲ့ ကျောက်ကျောက ပိုစားကောင်းမှာပါ။ :)